Germany: Gabar soomaali ah oo qisadii ay isku dhiibtay, maxkamad lagu saaray. - NorSom News
Germany: Gabar soomaali ah oo qisadii ay isku dhiibtay, maxkamad lagu saaray.
Gabar Soomaali ah oo sanadkii 2013 Germany soo gashay, ayaa markii ay magangalyada codsaneysay sheegtay in Soomaaliya gudaheeda ay labo nin ku kufsadeen, kadibna ay mid kamid ah labadii nin toori ay la dhacday, dhaawacyo waaweyna ay gaarsiisay. Sidaas darteedna ay uga soo baxsatay dalkeedii hooyo, hadana ay Germany magangalyo weydiisaneyso.
Laamaha amniga dalka Germany, ayaa markii ay akhristeen warbixinta wareysiga laga qaaday gabadhan ku eedeeyay dacwad danbiyeed ah inay meel ka baxsan Germany ku gashay danbi isku day dil ah. Waxaana la geeyay maxkamad dhageysatay dacwadeeda.
Jimcihii shaley aheyd ayaa lagu xukumay lix bilood oo xarig shuruudeysan ah, iyada oo aan hada xabsiga gali doonin, laakiin hadii ay wax danbi ah gasho lixda bilood ee soo socoto, waxey markaas toos u qaadan doontaa mudadii xabsi ee lagu xukumay.
Xigasho/kilde: Gericht verschont Frau, die auf Vergewaltiger einstach
Previous articleDaawo: Wasiir difaacay xaq-lahaanshaha ismaamul ee Tawfiiq iyo goobaha cibaadada ee kale.
Next articleNAV oo boqolaal aabe si xaqdaro ah ugu diiday fasax ay xaq u lahaayeen.